FMI: manohana ny harena an-kibon’ny tany | NewsMada
FMI: manohana ny harena an-kibon’ny tany
Par Taratra sur 18/05/2019
Samy mahatsapa ny fanjakana sy ny Tahirimbola iraisam-pirenena (FMI)amin’ ny lanjan’ny harena an-kibon’ny tany sy ny solika ho fampandrosoana ny toekarena.
Nihaona tamin’ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika (MMRS), Ravokatra Fidiniavo, ny solontenan’ny Tahirimbola iraisam-pirenena (FMI) eto amintsika, i Marc Gérard, ny alakamisy 16 mey teo.
Nambaran’ny minisitra, Ravokatra Fidiniavo, fa tanjona iombonan’ny roa tonta ny hitondran’ny sehatry ny fitrandrahana ny harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara fampandrosoana toekarena sady mipaka any amin’ny isan-tokantranon’ny Malagasy.
Hatsaraina ny lafiny hetra
Nanamafy ny fahavononany hanohana an’i Madagasikara amin’ity sehatra ity ny solontenan’ny FMI, amin’ny alalan’ny fanohanana teknika, ny fanamafisana ny fahaiza-manao amin’ny lafiny hetra amin’ny harena an-kibon’ny tany mba hiantraika any amin’ny lafiny toekarena ankapobeny azo tsapain-tanana.
Miara-mahatsapa ny roa tonta fa mitondra voka-tsoa ho an’ny fampandrosoana ny toekarena ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany sy ny solika. Nomarihin’i Marc Gérard koa ny hijerena manokana ny hanatsarana bebe kokoa ny lafiny hetra amin’ireo sehatra ireo. Hitohy ity fihaonan’ny roa tonta ity, hijerena ity lafin-javatra ity.
Fanohanana fampianarana any Atsimo : nanome 4,16 tapitrisa dolara i Norvezy 08/07/2020
Fisandohana ben’ny Tanàna : naiditra am-ponja koa ny Sefo Zap 08/07/2020
Miaraka amin’ny PAM : mitohy ny fizarana Tosika fameno 08/07/2020
Fenoarivo Atsinanana : jiolahy naha­trarana basy sy lavanila halatra 78 kg 08/07/2020
Dokambarotra amin’ny fitsaboana : noraràna ny an’ny Fitrama tarihin’i R. Jean Nirina 08/07/2020